Global Voices teny Malagasy » Vondrona Miampanga ireo Fanafihana Tsy Miato ety Anaty Aterineto Atao an’ireo Media Tsy Miankina Ao Filipina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2019 11:44 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika
Vondrona miampanga ireo fanafihana ety anaty aterineto atao an'ireo media marobe tsy miankina ao Filipina. Sary: Kodao Productions, nampiasaina nahazoana alalana.
Ny 12 Martsa 2019, tao Filipina, nankalaza ny Andro Erantany Hanoherana Ny Sivana Amin'ny Aterineto ireo vondrona media marobe, tamin'ny alalan'ny fanaovana  fanoherana iray mba hiampangana ny fisiana fanafihana atao amin'ny aterineto atao amin'ireo tranonkala Web-n'izy ireo izay, araka ny voalazan'izy ireo ihany, tohanan'ny governemanta.
Hatramin'ny volana desambra 2018, ireo tranonkala Web-n'ireo vondrona media azo isafidianana, Kodao Productions, Pinoy Weekly, sy Altermidya, no lasibatry ny fanafihana tamin'ny alalan'ny fanafihana (DDoS), fanasemporana lohamilina.
Voatafika tamin'ny volana lasa teo ihany koa ireo tranonkala an'ny Arkibong Bayan, Manila Today sy ny Fikambanana Nasionalin'ireo Mpanao Gazety ao Filipina. 
Araka ny voalazan'ny Vovonan'ny Asa Fanaovana GAzety ao Azia Atsimo Atsinanana, farafahakeliny tranga 10 tamin'ny fanafihana amin'ny aterineto natao an'ireo sampana fampahalalam-baovao Filipiana no voarakitra  hatramin'ny nahatongavan'ny Filoham-pirenena Rodrigo Duterte teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 2016.
Qurium, orina mediatika iray avy ao Soeda nanampy an'ireo vondrona media ireo, no nanamafy ny fisian'ireo fanafihana DDoS nanjo ny Altermidya sy ireo tranonkala hafa mpilaza vaovao afaka safidiana.
Azonay hamafisina fa tamin'ny 8 febroary, nanodidina ny tamin'ny 7 ora maraina, no nanomboka ny fanafihana fanasemporana ny @Altermidya  ary tsy nitsahatra izany hatramin'izay. Naaton'ny mpamatsy fampiantranoana ny kaontin-dry zareo. https://t.co/WaxyLpDj3y 
Nanaovana tatitra tany amin'ny National Computer Emergency Response Team (NCERT) an'ny governemanta, Departemanta misahana ny Fampahalalam-baovao sy ny Serasera Teknolojia (DICT) ny antsipirihany tamin'ilay fanafihana DDoS. Iray volana lasa taty aoriana tsy niraharahian'ny governemanta ny tatitra nataon'izy ireo, nanapa-kevitra ireo vondrona tarihin'ny Altermidya ny hanao hetsika manoloana ny biraon'ny NCERT.
Tao anatina fanambàrana matoandahatsoratra iray, nampifandraisin ‘ireo vondrona media ireo tamin'ny fanakombonam-bava ataon'ny governemanta amin'ny mapnohitra ireo fanafihana amin'ny aterineto ireo.
Mampiasa ny fomba rehetra ny Fitondrana Duterte mba hampanginana ny fanoherana, ireo tsikera sy ny fahalalahana maneho hevitra: miainga amin'ireo fandrahonana, ny fanagadrana hatramin”ireo famonoana ho faty, hatramin'ny ady eo amin'ny aterineto. Ny voakendry tamin'io fanafihana farany io dia ireo media fanolo izay ny ankamaroany dia manaparitaka tatitra amin'ny tambajotra an'ireo fanadihadiana sy ireo fanehonkevitra mikasika an'ireo trangan-javatra sy ireo olana izay mahàlana ny fikirakiràna azy, na tsy misy mihitsy, ataon'ireo media mpanjakazaka. Ny tanjona dia ny hanakanana tsy hahazoan'ny vahoaka noana te-hahazo fampahalalam-baovao sy ireo tantara izay ilainy izay zava-mitranga ao amin'ny firenena ataon'ny lainga sy vaovao tsy marina fahirano.
Nohelohin'ny editorialy ireo fanafihana marobe  manohitra ny fampahalalam-baovao, indrindra fa ireo heverina fa mitsikera ny governemantan'i Duterte.
Nandritra ny #WorldDayAgainstCyberCensorship  (andro erantany anoherana ny fanivànana ny aterineto), nandray anjara tamin'ny fihaonana fanoherana tao Manille ny #Engagemedia  , nokarakarain'ireo vondrona media fanolo miorina ao Filipina mba hanamelohana ireo fanafihana tsy mitsahatra atao amin'ny aterineto manjo an'ireo media mpitsikera #NoToCyberCensorship  #DefendIndependentMedia  #DefendPressFreedom  pic.twitter.com/LCu2dGJnff 
Nanazava  teo amin'ny facebook ny antony nanaovany hetsika hanoherana ny NCERT, i Rhea Padilla, mpandrindra nasionaly ny Altermidya, manao hoe:
Izay no antony maha eto antsika. Takiantsika ny hanaovan'izy ireo hetsika mikasika an'ireo fanafihana. Raha tsy izany, dia hankany amin'ny finoana isika hoe mpiray tsikombakomba ny NCERT sy ny DICT amin'ny fanafihana manjo ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety..
Naverin'i Toby Roca, mpanao tatitra ao amin'ny Altermidya, ny teniny hoe:
Mbola misy ny fotoana azon'ny DICT hanaovana hetsika. Afaka manadihady mikasika an'ireo fanafihana atao amin'ny aterineto ny governemanta ary manenjika ara-pitsaràna an'ireo tomponantoka. Tokony hiaiky ny Fanjakana fa ireo fanafihana fnasemporana mitohy miainga avy amin'ireo lohamilina ao Filipiana ireo dia efa asa miharo heloka bevava izay tsy maintsy atsahatra. #KeepUsOnline 
Jola Diones-Mamangun, tale mpanatanteraka ao amin'ny Kodao Productions, dia nitsikera  ny fampiasàna raboto sy ireo ‘trolls’ (mpandoto / mpanaratsy) mba hanohintohinana ny asan'ireo media tsy miankina.
Tsy faly tamin'ny fiketrehana vaovao diso sy ireo fakom-baovao, mikiribiby ny fitantanan'i Duterte amin'ny alalan'ny fampanginana izay heverina ho mpitsikera manindrotsindrona sy mpanohitra ara-politika ary mizotra mankany amin'ny fihenjanana sy mitrandraka na dia ny fahefan'ny vohikala matroka aza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/25/136055/
 Fikambanana Nasionalin'ireo Mpanao Gazety ao Filipina.: https://nujp.org/headlines/were-still-up-nujp-site-swamped-by-426gb-ddos-strike/
 no voarakitra: https://www.seapa.org/philippines-digital-reality-bites-alternative-media-in-the-crosshairs-of-cyber-attacks/?utm_source=twitter&fbclid=IwAR3Vwu_NfVirbJyOCVGpsVJ3Gu0CeppRpDUYATboQ59703ccZCrQCp7P7L8
 ireo fanafihana marobe: https://globalvoices.org/2019/02/25/journalists-teachers-and-activists-targeted-in-attacks-on-free-speech-in-the-philippines/